Farmaajo iyo Fahad oo lagu eedeeyay weerarka Macalimuu | KEYDMEDIA ENGLISH
General Cabdalla, wuxuu xusay in dadka la shaqeeyay RW Rooble, ee liiska khaarijinta ku qoran ay badan yihiin, wuxuuna qaraxa maanta caasimadda ka dhacay ku macneyay duullaan lagu soo qaaday shacabka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Shakiga la xariira in kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo iyo Fahad Yaasiin hoggaamiyaan, ay musuul ka ahaayeen qarixii 20-kii November, lagu kharijiyay Allaha u naxariistee, Agaasimihii Radio Muqdisho, Cabdicasiis Maxamuud Guleed [Afrika], ayaa maanta xoogeystay kadib markii la bar-tilmaameedsaday Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimuu.
Taliye ku xigeynkii hore ee hay’adda Nabad-sugidda iyo sir-doonka Qaranka, General Cabdalla Cabdalla, oo muddo dheer ka digay khatar amni oo ku fool leh, howl-wadeennada xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, aya sheegay in weerarka Mucalimuu uu ka danbeeyay Xaafiiska Farmaajo.
General Cabdalla, wuxuu xusay in dadka la shaqeeya RW Rooble, ee liiska khaarijinta ku qoran ay badan yihiin, wuxuuna qaraxa maanta caasimadda ka dhacay ku macneyay duullaan lagu soo qaaday shacabka.
“Xafiiska RW Rooble inuu target yahay hore ayaan u sheegnay, welina waxaa dhiman dhowr qof kale oo ah howlwadeenada xafiiskiisa oo ku jira liiska ay Farmaajo iyo Fahad u qorsheeyeen khaarajinta”. Ayuu yiri Cabdalla Cabdalla.
Wuxuu ku sii daray, “Allah ha u naxariisto intii maanta ku shahiiaday weerarkii argagixisada F&F iyo Al-Shabab kusoo qaadeen shacabka Soomaaliyeed ee Xamar ku nool, inta dhawacana allah ha caafiyo”.
Cabicasiis Afrika, oo loo aqoonsan yahay, inuu ahaa, wariyaha ugu saameynta badan warbaahinta qaranka, tan iyo markii dib loo howl-galiyay 2011-kii, ayaa duco iyo tacsi ka waayay xaafiiska Farmaajo, taas oo hore u abuurtay shakiga ay dadka qaar qabaan ee ah in khaarijintiisa ay ka danbeysay Madaxtooyada.
Kadib isku dhicii Farmaajo iyo Rooble, waxaa la beegsaday agaasimihii Radio Muqdisho [Dhimasho] agaasimihii Telefishinka Qaranka Soomaaliya [Dhaawac] iyo af-hayeenkii Xukuumadda [Dhaawac], labada hore, waxa ay masuul ka aheeyeen in wararka MW hore Farmaajo laga hor istaago warbaahinta Qaranka.